၂၁ ရာစုရဲ့ အအောင်မြင်ဆုံးကစားသမားအဖြစ် ရပ်တည်ဖို့ မက်ဆီဘာတွေလိုအပ်နေသေးလဲ – Sports A2Z
International • La Liga
၂၁ ရာစုရဲ့ အအောင်မြင်ဆုံးကစားသမားအဖြစ် ရပ်တည်ဖို့ မက်ဆီဘာတွေလိုအပ်နေသေးလဲ
ပြီးခဲ့တဲ့ ကိုပါအမေရိကဖလားကို ဗိုလ်ဝင်ခံပြီး အာဂျင်တီးနားအသင်းနဲ့အတူ ပထမဦးဆုံး နိုင်ငံတကာအောင်မြင်မှုကို သရဖူဆောင်းနိုင်ခဲ့တဲ့ GOAT ကြီး လီယွန်နယ် မက်ဆီဟာ ၂၁ ရာစုရဲ့ အအောင်မြင်ဆုံးကစားသမားအဖြစ် ရပ်တည်နိုင်ပြီလားဆိုတဲ့ မေးခွန်းမှာတော့ အထာမကျစရာတွေ ရှိနေခဲ့သေးတာပါ။
မက်ဆီအတွက်တော့ အာဂျင်တီးနားကို ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲကြီးအပါအဝင် ဗိုလ်လုပွဲ ၅ ​ကြိမ်အထိရောက်အောင် စွမ်း​ဆောင်နိုင်ခဲ့ပေမယ့် ၄ ကြိမ်ဆက် အရေးနိမ့်ပြီး အခုအချိန်မှ ဖလားတလုံးသာ ရရှိခဲ့တာကလည်း ကံချော်မှုတခုလို့ ဆိုရမှာဖြစ်ပြီး အသက် ၃၄ နှစ်သားရဲ့ ကိုပါအမေရိကအောင်မြင်မှုမှာတော့ တကမ္ဘာလုံးက ဝမ်းသာပီတိလက်ခုပ်သံတွေက အတိုင်းအဆမရှိ ပလူပျံသွားခဲ့တာကိုလည်း တွေ့ခဲ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။.
တကယ်တော့ ဒါဟာ မက်ဆီအနေနဲ့ သူ့ကိုယ်သူထပ်မံသက်သေပြဖို့ မလိုအပ်တော့လောက်အောင်၊ ဘယ်ဂန္ထဝင်ကိုမှ ခြေရာတိုင်းဖို့ မလိုလောက်အောင်… ဒါ့အပြင် ဘောလုံးသမိုင်းမှာ ဘယ်သူမှနဲ့ ချိန်ထိုးပြီး နှိုင်းယှဥ်ခံဖို့ မလိုအပ်တော့လောက်အောင်အထိ ပရိသတ်တွေက ချစ်ခင်ဂရုဏာသက်ရတဲ့ အပြီးပြည့်စုံဆုံး ကစားသမားအဖြစ် ရိုးရိုးရှင်းရှင်းပဲ ဖန်တီး​ပြသွားခဲ့တာပါ။
ကိုပါအမေရိကဖလားဟာ အာဂျင်တီးနားသားကြီးအတွက် ၃၈ လုံးမြောက် ဆုဖလားဖြစ်လာခဲ့သလို ၂၁ ရာစုရဲ့ ဆုဖလားအောင်မြင်မှုအများဆုံး ထိပ်တန်း ၁၀ ဦး ကစားသမားစာရင်းမှာ နံပါတ် ၃ နေရာအထိ တက်လှမ်းလာစေခဲ့တာကို အချက်အလက်အရ မြင့်တွေ့ခဲ့ရပြီး ထာဝရပြိုင်ဘက် ခရစ္စတီယာနို ရော်နယ်လ်ဒိုထက် ဖလား ၃ လုံးအသာနဲ့ ဦးဆောင်သွားခဲ့ပါတယ်။
၂၁ ရာစုရဲ့ အအောင်မြင်ဆုံးကစားသမားစာရင်းရဲ့ နံပါတ် ၂ နေရာမှာတော့ မက်ဆီရဲ့ ဘာဆာအသင်းဖော်ဟောင်း အန်ဒရက်စ် အင်နီယေစတာက ဆုဖလား ၃၉ လုံးနဲ့ ရပ်တည်နေသလို နံပါတ် ၁ နေရာမှာ ပြတ်ပြတ်သားသား ဦးဆောင်နေတဲ့ ကစားသမားကတော့ နူးကမ့်မိတ်ဆွေဟောင်းဖြစ်တဲ့ ဘရာဇီးလ်သား ဒန်နီယယ်လ် အဲလ်ဗက်စ်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အသက် ၃၈ နှစ်အရွယ် ညာနောက်ခံလူဟာ ၂၁ ရာစုမှာ ဆုဖလား ၄၀ နဲ့အထက် ဆွတ်ခူးထားတဲ့ တဦးတည်းသော ကစားသမားဖြစ်ပြီး သူ့အနေနဲ့ ၂၀၁၉ ခုနစ်မှာ ဘရာဇီးလ်အသင်းအတွက် ကိုပါအမေရိကဖလားကို သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့သလို လက်ရှိမှာ ဆုဖလား ၄၂ လုံးအထိ အောင်မြင်ထားတာကို တွေ့ရှိရပြီး ဒါဟာ မက်ဆီကျော်ဖြတ်ရမယ့် နောက်ထပ်စိန်ခေါ်မှုတခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။
ထာဝရအကောင်းဆုံးကစားသမားအဖြစ် သမိုင်းလှပသွားဖို့ဆိုရင် မက်ဆီအနေနဲ့ နောက်ထပ် ဆုဖလား ၅ လုံး လိုအပ်သေးတယ်လို့ သတ်မှတ်ခံထားရချိန်မှာ နာမည်ကြီးတွေဖြစ်တဲ့ ဇလာတန် အီဘရာဟီမိုဗစ်ချ်နဲ့ အာဂျန် ရော်ဘင်တို့က ဆုဖလား ၃၂ လုံးနဲ့ အဆင့် ၉ နေရာမှာ အတူတူရပ်တည်နေကြပါတယ်။
ဆုဖလား​ပေါင်းအနေနဲ့ အဆင့် ၈ မှာ ဘူးစကွက်စ်က ၃၄ လုံး၊ အဆင့် ၇ မှာ ရော်နယ်ဒိုက ၃၅ လုံး၊ အဆင့် ၄ မှာ ဂျရတ် ပီကေး၊ ဟိုဆမ် အရှော၊ မက်စ်ဝဲလ်တို့က ၃၇ လုံးနဲ့ အသီးသီးရပ်တည်နေကြကြောင်း သိရှိရပြီး ဘာစီလိုနာတိုက်စစ်မှူးကြီး မက်ဆီအနေနဲ့ ကစားသမားဘဝကို အဆုံးမသတ်ခင်မှာ သူဘာဆက်လုပ်ပြမလဲဆိုတာက စိတ်ဝင်စားချင်စရာပါ။
ပါးစပ်ပြောသတ်မှတ်မှုအရ ထာဝရအကောင်းဆုံးကစားသမားဆိုတဲ့ ဂုဏ်ပုဒ်အပြင် အချက်အလက်အရ ၂၁ ရာစုရဲ့ အအောင်မြင်ဆုံးကစားသမားအဖြစ်ပါ မက်ဆီတယောက် ရပ်တည်လာနိုင်မှာလားဆိုတာကိုတော့ ပရိသတ်တွေအတွက် နှစ်အနည်းငယ်အတွင်းမှာပဲ အဖြေပေါ်ထွက်လာမှာဖြစ်ကြောင်း တင်ဆက်ပေးပါရစေ။
ZAWGYI: ၿပီးခဲ့တဲ့ ကိုပါအေမရိကဖလားကို ဗိုလ္ဝင္ခံၿပီး အာဂ်င္တီးနားအသင္းနဲ႔အတူ ပထမဦးဆုံး ႏိုင္ငံတကာေအာင္ျမင္မႈကို သရဖူေဆာင္းႏိုင္ခဲ့တဲ့ GOAT ႀကီး လီယြန္နယ္ မက္ဆီဟာ ၂၁ ရာစုရဲ႕ အေအာင္ျမင္ဆုံးကစားသမားအျဖစ္ ရပ္တည္ႏိုင္ၿပီလားဆိုတဲ့ ေမးခြန္းမွာေတာ့ အထာမက်စရာေတြ ရွိေနခဲ့ေသးတာပါ။
မက္ဆီအတြက္ေတာ့ အာဂ်င္တီးနားကို ကမာၻ႔ဖလားၿပိဳင္ပြဲႀကီးအပါအဝင္ ဗိုလ္လုပြဲ ၅ ​ႀကိမ္အထိေရာက္ေအာင္ စြမ္း​ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ေပမယ့္ ၄ ႀကိမ္ဆက္ အေရးနိမ့္ၿပီး အခုအခ်ိန္မွ ဖလားတလုံးသာ ရရွိခဲ့တာကလည္း ကံေခ်ာ္မႈတခုလို႔ ဆိုရမွာျဖစ္ၿပီး အသက္ ၃၄ ႏွစ္သားရဲ႕ ကိုပါအေမရိကေအာင္ျမင္မႈမွာေတာ့ တကမာၻလုံးက ဝမ္းသာပီတိလက္ခုပ္သံေတြက အတိုင္းအဆမရွိ ပလူပ်ံသြားခဲ့တာကိုလည္း ေတြ႕ခဲ့ၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။.
တကယ္ေတာ့ ဒါဟာ မက္ဆီအေနနဲ႔ သူ႔ကိုယ္သူထပ္မံသက္ေသျပဖို႔ မလိုအပ္ေတာ့ေလာက္ေအာင္၊ ဘယ္ဂႏၴဝင္ကိုမွ ေျခရာတိုင္းဖို႔ မလိုေလာက္ေအာင္… ဒါ့အျပင္ ေဘာလုံးသမိုင္းမွာ ဘယ္သူမွနဲ႔ ခ်ိန္ထိုးၿပီး ႏႈိင္းယွဥ္ခံဖို႔ မလိုအပ္ေတာ့ေလာက္ေအာင္အထိ ပရိသတ္ေတြက ခ်စ္ခင္ဂ႐ုဏာသက္ရတဲ့ အၿပီးျပည့္စုံဆုံး ကစားသမားအျဖစ္ ႐ိုး႐ိုးရွင္းရွင္းပဲ ဖန္တီး​ျပသြားခဲ့တာပါ။
ကိုပါအေမရိကဖလားဟာ အာဂ်င္တီးနားသားႀကီးအတြက္ ၃၈ လုံးေျမာက္ ဆုဖလားျဖစ္လာခဲ့သလို ၂၁ ရာစုရဲ႕ ဆုဖလားေအာင္ျမင္မႈအမ်ားဆုံး ထိပ္တန္း ၁၀ ဦး ကစားသမားစာရင္းမွာ နံပါတ္ ၃ ေနရာအထိ တက္လွမ္းလာေစခဲ့တာကို အခ်က္အလက္အရ ျမင့္ေတြ႕ခဲ့ရၿပီး ထာဝရၿပိဳင္ဘက္ ခရစၥတီယာႏို ေရာ္နယ္လ္ဒိုထက္ ဖလား ၃ လုံးအသာနဲ႔ ဦးေဆာင္သြားခဲ့ပါတယ္။
၂၁ ရာစုရဲ႕ အေအာင္ျမင္ဆုံးကစားသမားစာရင္းရဲ႕ နံပါတ္ ၂ ေနရာမွာေတာ့ မက္ဆီရဲ႕ ဘာဆာအသင္းေဖာ္ေဟာင္း အန္ဒရက္စ္ အင္နီေယစတာက ဆုဖလား ၃၉ လုံးနဲ႔ ရပ္တည္ေနသလို နံပါတ္ ၁ ေနရာမွာ ျပတ္ျပတ္သားသား ဦးေဆာင္ေနတဲ့ ကစားသမားကေတာ့ ႏူးကမ့္မိတ္ေဆြေဟာင္းျဖစ္တဲ့ ဘရာဇီးလ္သား ဒန္နီယယ္လ္ အဲလ္ဗက္စ္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
အသက္ ၃၈ ႏွစ္အ႐ြယ္ ညာေနာက္ခံလူဟာ ၂၁ ရာစုမွာ ဆုဖလား ၄၀ နဲ႔အထက္ ဆြတ္ခူးထားတဲ့ တဦးတည္းေသာ ကစားသမားျဖစ္ၿပီး သူ႔အေနနဲ႔ ၂၀၁၉ ခုနစ္မွာ ဘရာဇီးလ္အသင္းအတြက္ ကိုပါအေမရိကဖလားကို သိမ္းပိုက္ႏိုင္ခဲ့သလို လက္ရွိမွာ ဆုဖလား ၄၂ လုံးအထိ ေအာင္ျမင္ထားတာကို ေတြ႕ရွိရၿပီး ဒါဟာ မက္ဆီေက်ာ္ျဖတ္ရမယ့္ ေနာက္ထပ္စိန္ေခၚမႈတခုလည္းျဖစ္ပါတယ္။
ထာဝရအေကာင္းဆုံးကစားသမားအျဖစ္ သမိုင္းလွပသြားဖို႔ဆိုရင္ မက္ဆီအေနနဲ႔ ေနာက္ထပ္ ဆုဖလား ၅ လုံး လိုအပ္ေသးတယ္လို႔ သတ္မွတ္ခံထားရခ်ိန္မွာ နာမည္ႀကီးေတြျဖစ္တဲ့ ဇလာတန္ အီဘရာဟီမိုဗစ္ခ်္နဲ႔ အာဂ်န္ ေရာ္ဘင္တို႔က ဆုဖလား ၃၂ လုံးနဲ႔ အဆင့္ ၉ ေနရာမွာ အတူတူရပ္တည္ေနၾကပါတယ္။
ဆုဖလား​ေပါင္းအေနနဲ႔ အဆင့္ ၈ မွာ ဘူးစကြက္စ္က ၃၄ လုံး၊ အဆင့္ ၇ မွာ ေရာ္နယ္ဒိုက ၃၅ လုံး၊ အဆင့္ ၄ မွာ ဂ်ရတ္ ပီေကး၊ ဟိုဆမ္ အေရွာ၊ မက္စ္ဝဲလ္တို႔က ၃၇ လုံးနဲ႔ အသီးသီးရပ္တည္ေနၾကေၾကာင္း သိရွိရၿပီး ဘာစီလိုနာတိုက္စစ္မႉးႀကီး မက္ဆီအေနနဲ႔ ကစားသမားဘဝကို အဆုံးမသတ္ခင္မွာ သူဘာဆက္လုပ္ျပမလဲဆိုတာက စိတ္ဝင္စားခ်င္စရာပါ။
ပါးစပ္ေျပာသတ္မွတ္မႈအရ ထာဝရအေကာင္းဆုံးကစားသမားဆိုတဲ့ ဂုဏ္ပုဒ္အျပင္ အခ်က္အလက္အရ ၂၁ ရာစုရဲ႕ အေအာင္ျမင္ဆုံးကစားသမားအျဖစ္ပါ မက္ဆီတေယာက္ ရပ္တည္လာႏိုင္မွာလားဆိုတာကိုေတာ့ ပရိသတ္ေတြအတြက္ ႏွစ္အနည္းငယ္အတြင္းမွာပဲ အေျဖေပၚထြက္လာမွာျဖစ္ေၾကာင္း တင္ဆက္ေပးပါရေစ။
ပီအက်စ်ဂျီရောက် ဆာဂျီယို ရာမို့စ်ရဲ့ စိတ်ထိခိုက်စရာ အခိုက်အတန့်
မြောက်အမေရိကဘောလုံးသမိုင်းတစ်လျှောက် ပြောင်းရွှေ့ကြေးအမြင့်ဆုံး ကစားသမား ၅ ယောက်
Bundesliga • La Liga • UCL&UEL
ဘိုတန်ကို အရှက်ခွဲခဲ့တဲ့ မက်ဆီလိုမျိုး ပီကေးကို...
Bundesliga • La Liga • Match Report • UCL&UEL
ဘာစီလိုနာကို နူးကမ့်မှာ သုံးဂိုးသွင်းပြီး...
La Liga • Other
ပီရက်ဇ်ကြောင့် မက်ဆီကို ဆုံးရှုံးရခြင်းဖြစ်တယ်လို့...
La Liga • Ligue1 • Other
အမ်ဘာပေကို ဆက်ထိန်းထားနိုင်ဖို့ သမ္မတကူပါ...